Xiddig Aan Laga Filayn Inuu Chelsea Ka Baxo Oo Sii Socda & Afarta Kooxood Ee Xiisaynaya - GOOL24.NET
Xiddig Aan Laga Filayn Inuu Chelsea Ka Baxo Oo Sii Socda & Afarta Kooxood Ee Xiisaynaya
Kooxda Chelsea ayaa ah mid ay kusii ballaadhanayaan xiddigaha caqabadu ka haysato mustaqbalkooda gaar ahaan daafacyadu, iyadoo hore muran uga taagnaa Antonio Rudiger ayuu haatan meel kale gaadhay muranka ka taagan mustaqbalka Andreas Christensen.
25 sano jirkaas ayuu heshiiskiisa Blues yahay mid dhacaya dhammaadka xilli ciyaareedkan waxaana uu haatan xor u yahay inuu wadahadalo lasii bilaabo kooxaha aan ahayn English-ka.
Bayern Munich iyo Barcelona ayaa raadinaya saxeexyo bilaash ah waxaana ay xiddiga Danish-ka ah ku darsadeen liiska ciyaaryahanada ay xagaaga doonayaan, si lamid ah Borussia Dortmund iyo Atletico Madrid.
Sida uu sheegayo saxafi Fabrizio Romano, labada kooxood ee xiisaha ugu badan u qaba saxeexa Christensen ayaa ah Bayern iyo Barcelona. Dalabkii ay Chelsea u gudbisay ayaa wali ah mid miiska u saaran balse wali wax heshiis kordhin ah la iskuma fahmin.
Chelsea ayay warar cusubi sheegayaan inay meel fiican marinayso oo wax iska bedeleen heshiiskii cusbaa ee ay ka doonayeen Antonio Rudiger kaas oo hor ugu gacan saydhay dalab 140,000 oo pound uu mushahar ahaan ugu qaadanayay toddobaadkii.
Blues ayaa dhawaan hal sano oo kale kordhiyay heshiiska Thiago Silva kaas oo xilli ciyaareedkii labaad hadda ku qaadanaya Stamford Bridge.
Thomas Tuchel ayaa lagu wadaa inuu daafac dhexe kusoo kordhin doono kooxdiisa xagaaga sanadkan iyadoo la xasuusto sidii ay Jules Kounde oo Sevilla ka tirsan ugu dhawaadeen sanadkii hore.